Akụkọ - Etu esi etinye pvc mgbidi eji achọ mma
Ogwe mgbidi PVC bụ ezigbo nhọrọ maka ịchọ mma mgbidi. Nsonaazụ ịchọ mma zuru oke dị elu ma ọnụahịa dị ọnụ. Kwesịrị ịmụ ụfọdụ ihe ọmụma ọkachamara mgbe ị na-etinye, nke mere na ụlọ ịchọ mma nwere ike ịdị ngwa ngwa ma nwee ike ị nweta mmachi mma. Ka m gosi gi, otu esi etinye pvc wall decoration board?
1. Esi wụnye ịkwanyere mgbidi chọọ mbadamba
1. Mgbe ị na-achọ mma, ị nwere ike ịhọrọ ụdị nkwusi akọrọ, gụnyere idozi eriri na mgbidi ala, ma jikọta bọọdụ mkpuchi mkpuchi ihe eji achọ mma na keel site na nkwonkwo ígwè ma ọ bụ arịlịka pụrụ iche. Enwere ike imechi nkwonkwo dị n'etiti nkwonkwo site na usoro mkpuchi mgbidi nke mpụga nke bọọdụ, bọọdụ benzene ma ọ bụ ajị anụ. dejupụta.
2. fullydị nke zuru ezu dabara adaba maka ọrụ mkpuchi mgbidi dị n'ime. Ya mere, n'oge echichi nke ihe mkpuchi ihe mkpuchi nke mpụga, a na-ejikọ njikọ mkpuchi ihe eji achọ mma na mgbidi dị n'okpuru site na ijikọ ma ọ bụ njikọ zuru ezu, nke a na-akpọ ụdị nkekọ zuru oke. A ghaghị ikpebi usoro akwụkwọ ntuziaka dịka atụmatụ achọrọ nke usoro a kapịrị ọnụ. Jiri ngwa agha ma obu ihe ndi ozo puru iche iji jupụta oghere n'etiti nkwonkwo.
3. Ngwakọta nke arịlịka arịlịka na osisi arịlịka na-adabere na ihe ndị chọrọ iwu. Usoro mkpuchi mkpuchi ihe dị n'èzí nke ihe eji achọ mma na-ejikọta ya na nkwonkwo na arịlịka arịlịka iji dozie mbadamba ihe mkpuchi ọkụ na mgbidi. A na-ejikọta ntọala ahụ na pendant zuru ezu na akọrọ, a na-ejikwa ya na injinia.
2. Okwu mmalite nke uru nke pvc mgbidi
1. Ihe kachasị baa uru bụ ibu ya. Ndị ọrụ ahụ zuru ike nke ukwuu n'oge a na-ewu ihe. Ọ nwere ezigbo mkpuchi mkpuchi ọkụ na ọrụ nchekwa okpomọkụ. Jiri ịkwanyere mgbidi chọọ PVC. N'uche, ọ dịkwa ezigbo mma na gburugburu ebe obibi. Thelọ bụ oge oyi. Oge ọkọchị na-ekpo ọkụ ma dị jụụ, na-ewepụ mkpa nke ikuku ikuku na ịchekwa ike dị ukwuu, mana ọ nwekwara uru nke ihe mgbochi mmiri, ire ọkụ, acid na nguzogide alkali, nguzogide corrosion, kichin ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ ụlọ ma ọ bụ mgbidi eji achọ mma.
2. Ihe eji achọ mgbidi PVC chọrọ mma kwụsie ike yana ezigbo ihe ọkụkụ. Mgbe eji ogologo oge, ọ na-adịgide adịgide karịa ihe ịchọ mma mgbidi ndị ọzọ. Ọ naghị atụ egwu ntigbu na ìhè anyanwụ. Ọ nwere ezigbo mgbochi ịka nká. Ọ dị mfe ịgbado ọkụ n'ọnụ ma nwee nnukwu nkwanye na mgbidi.
3. Ọdịdị dị elu, ike gbagọrọ agbagọ siri ike, nguzogide mmetụta siri ike, ogologo elongation na ezumike, ịchekwa ihe mgbe ị gụchara mma, ọ naghị adị mfe ịmefu na ịchekwa ego ịchọ mma. Ihe eji eme mgbidi ahụ pvc nwere ezigbo mma, agba na-enwu gbaa, usoro dị iche iche, mmetụta ọgaranya bara ụba nke ukwuu, yana ọtụtụ ngwa eji achọ mma.
4. Usoro ihe owuwu ahụ dị nnọọ mfe, ọ dị ezigbo mfe ịmalite echichi n'ụlọ, ntinye ahụ dịkwa mfe. PVC mgbidi chọọ osisi dị mfe ọcha na ndụ kwa ụbọchị. Ọ naghị atụ egwu ofe ọ bụla ma ọ bụ ụmụaka na-ede graffiti na uche ha. Naanị hichaa nwayọ na akwa mmiri mmiri iji weghachi ịdị ọcha.
5. PVC mgbidi mma osisi bụ a plastic mma ihe. A na-eji bọọdụ ntanet n'ụgbụgbọ osisi PVC. N'ihi nkọwa ya, agba ya na usoro ya, ọ dị ezigbo mma, makwaara dị ka ihe nkiri eji achọ mma, nke enwere ike iji maka ime ụlọ na mkpuchi ụlọ, ma jiri ya mee ihe n'ụdị dị iche iche nke mma ụlọ.